आधुनिक मौरीपालनतर्फ किसान
As of Sat, 30 May, 2020 16:25
कृषि विकास शाखाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी गाउँपालिकाले मौरी विकास शाखा स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको हो ।
इलाम-पछिल्लो समय हरेक पेशा र व्यवसाय आधुनिक तरिकाबाट हुन थालेको छ । यसै क्रममा मौरीपालन व्यवसाय पनि आधुनिक तरिकाबाट हुन थालेको हो । इलाममा अधिकांश किसानले धेरै पहिलाबाट मौरी पाल्ने गरेका छन् । तर पछिल्लो समयमा व्यावसायिक र आधुनिक तरिकाबाट मौरी पाल्न सुरु गरेका हुन् । परम्परागत रूपमा मौरीपालन हुँदै आएको इलामको रोङ गाउँपालिकामा व्यवसायीकरणका लागि मौरी विकास शाखा नै स्थापना गरिएको छ । कृषि विकास शाखाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी गाउँपालिकाले मौरी विकास शाखा स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको हो ।
स्थानीय तहमा मौरी संरक्षण र प्रवद्र्धन सुरु गरेको गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा पाँच सय किसानलाई व्यावसायिक मौरीपालक बनाउने योजना बनाएको अध्यक्ष शमसेर राईले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरी मौरी स्रोत केन्द्रको स्थापना समेत भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको २० लाख बजेटले सबै वडाका किसानलाई व्यावसायिक मौरीपालनको तालिम प्रदान गरिने उनको योजना छ । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि गाउँपालिकाभित्र परम्परागत मौरीका घार हटेका छन् ।
पाँच वर्षसम्म गाउँपालिकाले लगानी गर्ने र त्यसपछि मौरी शाखाले स्थापना गरेको मौरीको घार, मह बिक्रीबाट वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोत जुटाउने योजना रहेको अध्यक्ष राईले बताए । शाखालाई आत्मनिर्भर बनाउन देशभर मौरी र मह आपूर्ति गर्ने योजनासहित गाउँपालिकाले काम सुरु गरेको हो । इलामको मुख्य बजार झापा र काठमाडौं हो । धेरै महको बजार पछिल्लो समय भारतमा समेत बढेको छ । यसलाई प्रचार र अग्र्यानिक मौरीको मह उत्पादन गर्न सके बजार आफैँ विस्तार हुने अध्यक्ष राई बताउँछन् । तर महको वजारीकरणमा गाउँपालिका आफैं लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
विषादी प्रयोग घटाएर अग्र्यानिक गाउँपालिका बनाउने पहिलो कार्यक्रम आफूले अघि सारेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि मौरीस्रोत केन्द्र स्थापनासहित किसानलाई तालिम र मौरीका घार वितरण सुरु गरेको कार्यक्रम संयोजक कुमार मोक्तानले जानकारी दिए । उनका अनुसार मौरी लघु उद्यम कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ६० जना किसानलाई तालिम दिइने र उनीहरूलाई व्यवसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने गाउँपालिकाको लक्ष छ ।
तालिमपछि ३० जना मौरी किसानलाई मौरीका घारसहित आवश्यक सामग्री अनुदानमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ । पाँच वटासम्म घार भएका किसानलाई शुरुमा ५० प्रतिशत र अनुगमनका क्रममा प्रगति देखिएमा ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने योजना रहेको मोक्तानले वताए । कार्यक्रम सुरु भएसँगै गाउँपालिकाका कृषकले सकारात्मक चासो दिएको पनि मोक्तान बताउँछन् ।
गतवर्ष स्थापित मौरी स्रोत केन्द्रले मह संकलन र बजारीकरणको काम गरिरहेको छ । बजारमा शुद्ध महको माग पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको र जनताले समेत रुचाएको उनको अध्यक्ष राईले बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत शुद्ध मह उत्पादन, मौरीको स्याहार र महको उत्पादन बढाउने काम हुने छ । यस विषयमा किसानलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने र पाँच वर्षपछि मौरी स्रोत केन्द्र आफैं आत्मनिर्भर रहने समेत गाउँपालिकाको आशा छ । गाउँपालिकाले सुरु गरेको यस कार्यक्रम अभियानकै रूपमा अघि बढ्ने अध्यक्ष राई बताउँछन् ।
मौरीपालनको पकेट क्षेत्र मानिएको गाउँपालिकाको वडा नं. ६ स्थित जिर्मलेसहित सम्भावना रहेका सबै वडामा यस वर्ष तालिम र सामग्री वितरण गर्न २० लाख बजेट विनियोजन गरेको वडा नं. ३ का अध्यक्ष मातृका बरालको भनाइ छ । स्रोत केन्द्र स्थापना भएपछि इलाम आउने पर्यटकका लागि नयाँ कोशेली र गन्तव्य थपिने विश्वास उनले लिएका छन् । लामो समयसम्म मौरीपालन गर्दै आएका कुमार मोक्तानका अनुसार मौरी संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहले गरेको प्रयास इलामका लागि नै पहिलो रहेको हो । नेपाल सरकारले पनि स्रोत केन्द्रको संरक्षण गर्न चासो देखाउनुपर्ने मोक्तानले जनाएका छन् ।
गाउँपालिकाको योजनापछि इलामका कृषक मौरीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । घरमै आधुनिक घारमा मौरी पालेर राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि कृषक मौरीपालनतर्फ आकर्षित भएका हुन् । इलामको रोङ, माइजोगमाई, सूर्योदयका तत्लो भागमा मौरीपालन हुने गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार इलामका १ हजार ६०० कृषकले मौरीपालन गरेका छन् । त्यसमध्ये रोङ गाउँपालिकको जिर्मलेमा मात्र पाँच सय किसानले मौरीपालन गर्दै आएका छन् । इलाममा वार्षिक २२ मेट्रिक टन मह उत्पादन हुँदै आएको छ ।